युग्मन ड्राइभर परामर्श। हाम्रो परीक्षण रिपोर्ट उपयोगी छ
सुरु बच्चा र बच्चा आराम र यात्रा Kombikinderwagen
1 युग्मी ट्रेलर - बच्चाको लागि यातायातको एक व्यावहारिक माध्यम
2 युग्मी ट्रेलर - पेटेंट 3in1 मोडेल
3 कोइआई ट्रेलर - यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ
4 Kombikinderwagen - कि खरीद मा विचार गर्नु पर्छ
5 Kombikinderwagen - यसको धेरै फायदे
6 Kombikinderwagen - यो पनि नुकसान हुन सक्छ
7 युग्मी ट्रेलर - जहाँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ
8 आधुनिक combi-van - सधैं उपकरण र मूल्यमा ध्यान दिनुहोस्
9 Kombikinderwagen - बच्चाहरु को परिवहन को लागि एक पेटेंट स्पेस सेभर
युग्मी ट्रेलर - बच्चाको लागि यातायातको एक व्यावहारिक माध्यम
जब गर्भावस्थाको अन्तिम तेस्रोमा पुग्यो, त्यसो गर्दा धेरै प्रत्याशित आमाले साँचो व्यय जायसमाथि विजय हासिल गर्यो, र आज पनि, एक उपयुक्त स्ट्रोलर बच्चाको लागि महत्वपूर्ण खरीद मध्ये एक हो। यदि एक बिजुली खरिद गर्दा तपाईं निश्चित भएन भने एक पाडल र किट वास्तवमा आवश्यक छ भने विभिन्न प्रिाम मोडेलहरूको बहुतायत अर्को चुनौती हुनेछ। के आमाले आज जग्गाको लागि घुमक्क पार्नुपर्थ्यो वा परम्परागत घुमाउरो छ? तर बच्चाको लागि नामक बगैचा पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। अब पेटेंट डिजाइनर विचारहरु को घडी को धड़कता छ र यहाँ प्रोम केवल सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ।
युग्मी ट्रेलर - पेटेंट 3in1 मोडेल
यदि toddlers को लागि oversized खरीदारी संसार मा सही pram को लागि निर्णय कठिन छ, त्यस पछि एक संयुक्त घुमक्कड को पेटेंट लिन पर्छ। यदि वांछित बच्चाहरूको संख्या एक वा दुई जना बच्चाहरूमा सीमित छैन, व्यक्तिगत कार मोडेलको खरिद पनि सार्थक हुन सक्छ। तर सानो सानो परिवारको साथ बच्चाको लागि, जहाँ बच्चा कार पहिलो वा दोस्रो बच्चा साथीहरूलाई पछि दिइन्छ, यो संयुक्त बच्चाको क्यारियरको लायक छ। यसको अवयव र रूपान्तरणीय संभावनाहरु भरेर, यो अनुकूल र कार्यात्मक छ, ताकि सबै तीन सम्भावित बच्चाहरु को हेरविचार सधैं सामान ले जब सामान डिब्बेमा यात्रा गर्न सकिन्छ।
कोइआई ट्रेलर - यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ
संयोजन कार सामान्यतया चार पाङ्ग्राहरूसँग एक मोडेल हो, जसमा बच्चा बच्चाको रूपमा पहिलो विकल्प हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त बच्चा कटोरा संलग्न गर्न को संभावना छ, जो व्यावहारिक रूप देखि कार मा प्रयोग गरिन्छ। यदि बच्चा ठूलो छ भने, घुमाउरो बगैँचामा केही कदम हुनेछ र यो सबै अझै पनि एक निर्माता धेरै ताज लगाइएको छ, किनभने वितरण अझै अर्को डायपर झोला एउटै ह्युमा पनि वर्षा कवर, खुट्टा आवरण वा बोतल होल्डर प्रत्येक अन्य फेला पार्न र प्रसन्न भएको pram मा बच्चाहरु संग यात्रा गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि डेलिभरीको दायरामा एक परिवर्तनशील थैली पनि छ, त्यसपछि यो परिवर्तन परिवर्तन चटाईमा बदलिनु पर्छ। यो सबै यात्राको लागि साथमा लैजान सकिन्छ र पनि लपेट्न सजिलै संग र सरल हुन सक्छ। चार पाङ्ग्रा र ठूलो ह्यान्डल संग फ्रेम अप गुना बच्चा सीट वा carrycot बिना कार प्रयोग पछि बुट मा पूर्ण यसको स्थान पाउनुहुनेछ भनेर सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ। बेबी सीट वा carrycot सजिलै एक बच्चा सुरक्षित र यहाँ शान्ति मा एक झपकी लाग्न सक्छ त, सिट मा कार मा भण्डारण गर्न सकिँदैन।
Kombikinderwagen - कि खरीद मा विचार गर्नु पर्छ
यदि संयुक्त स्ट्रोलर धेरै परिवारहरूको लागि उत्तम छनौट देखिन्छ भने, तपाईंले आफैलाई सोध्नु अघि आफैलाई सोध्नुहोला, तर केही प्रश्नहरू, जो कि combi-van खरिदबाट बच्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। परिवार कार को लागी पहिलो कुरा प्रश्न थियो कि क्याम्बिस्टाइल मा एक आधुनिक घुमक्कड़ वास्तव मा ट्रंक मा फिट बस्छ। यदि तपाइँ अझै पनि आफ्नो सामान्य सानो कारको साथमार्फत ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ ट्रंकमा स्ट्रोकरको स्टुन्ट फ्रेम स्टिज गर्न समस्या पाउनुहुनेछ। कारको आधुनिक परिवारमा यो फिट हुन्छ तर यो राम्रो र त्यसैले परिवारले चुपचाप एक संयुक्त घुमक्कड खरीद गर्न सक्छ। पहिले नै तपाईंको आफ्नै जीवन शैली एक उपयुक्त बच्चा कार को छनौट मा भूमिका निभाउन सक्छ, किनकि यो सधैँ नागरिक नृत्य को लागी वा एक को लागी ग्रामीण क्षेत्र मा बाटो को चयन गर्न को लागी। तर यो प्रश्न यो कि बेबी कार उपयुक्त छ र रेल को उपयोग को लागी पनि सर्वोत्तम कोम्बिकिन्डरजेगन को खरीद निर्णय मा महत्वपूर्ण हुन सक्छ कि हो।
तपाईं त घुमक्कड फेरि घर तिर तान्नुहोस् कसरी कुनै लिफ्ट, साथ, एक उच्च तल्ला बाँचिरहेका छौं। यस उद्देश्यको लागि, उपयुक्त बच्चा कार बच्चासँग किनमेलको लागि उपयुक्त हुनुपर्छ। सायद छैन केवल एक बच्चा घोषणा, तर त्यहाँ जोडाहरू वा तीन अपेक्षा गर्न छन्। त्यसपछि प्रश्न अब सबै भन्दा राम्रो विकल्प सबै बच्चाहरु सहज हुन सक्छ र आमा बाट धक्का गर्न सकिन्छ कुनै पनि समस्या बिना सुनिश्चित गर्न हुन सक्छ घुमक्कड, उठ्छ। और यदि संयुक्त घुमक्कड़ बगैचा हुन्छ, अर्को प्रश्न उठ्छ। बच्चा अब किनभने निरन्तर आमा हेर्न र यति बस्न वा आमा रूपमा दृष्टि नै लाइन हुनुपर्छ। कठिन विकल्प एक संयुक्त अझै पनि pram एक विशिष्ट dreiräderiges को मानक मोडेल आनन्दित आमा चलिरहेको लागि मोडेल जगिंग वा बुबा खेल हो भनेर यहाँ विकल्प सक्षम रहेको, खेल आमा लागि हो। ड्राइभ जंगल तल्ला र पत्थर क्षति छिटो सुराकी छैन भनेर तपाईं एक ग्रामीण idyll आफ्नो बच्चा हुर्काउन चाहनुहुन्छ, टायर गुणस्तर, उल्लेख गर्नुपर्छ।
Kombikinderwagen - यसको धेरै फायदे
उल्लेख गर्न पहिलो कुरा, निस्सन्देह, अनुकूल मूल्य, किनकि यदि तपाईं संयुक्त घुमक्कडको रूपमा भागहरू खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यो धेरै अधिक महंगा हुनेछ। साथै, तपाईंसँग अहिले नै एउटै भागमा सबै भागहरू छन्। त्यसैले बच्चाको लागि कम्पास र तकिए पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि एकले सबै घटकको लागि एकै रङ्गिज पाउनेछ। यदि बच्चा बानी हुन्छ भने, यो नयाँ बेबीको क्यारियर पुन: खरीद गर्न आवश्यक छैन र फ्रेममा अर्को भाग मात्र राख्नु आवश्यक छ। यसले लागत बचत गर्छ र बच्चाको लागि अन्य महत्त्वपूर्ण चीजहरू खरिद गर्न बाटो छोडाउँछ, जुन उमेर अनुसार प्रयोग गरिन्छ। अर्को फाइदा बच्चा कारको लामो सेवा जीवन हो, केहि निर्माताहरूले 15 किग्राको वजन र तीन वर्षको साढे वर्षको बच्चाको आयुसँग जोड्दैछन्। उत्कृष्ट फाइदा भनेको डिलीवरीमा समावेश गरिएको धेरै घटक हो, यसैले पनि डायपर थैला र बच्चाको लागि अन्य महत्त्वपूर्ण चीजहरू बच्चाको क्यारियरको खरीद संग आवरण हुन्छन् र थप महँगो किनेको छैन।
Kombikinderwagen - यो पनि नुकसान हुन सक्छ
दुर्भाग्यवश, combi-van मोडेलमा केवल एक रैक उपलब्ध छ, त्यसैले अर्को बच्चालाई नयाँ फ्रेमको लागि हेर्न वा एक दोस्रो संयुक्त बच्चा कार खरिद गर्न आवश्यक छ। संयुक्त स्ट्रोलर केवल एक बच्चाको लागि खरीद गर्न मात्र हो। लगातार घुमक्क पार्ने र हटाउने गर्नाले, लुगा लगाउन बढी चाँडो हुन सक्छ। घुमक्कड एक मानक मोडेल होइन, त्यसैले अन्य प्राम मोडेलको एट्याचमेन्ट निश्चित रूपमा तपाईंको आफ्नै प्रिम मोडेलमा फिट हुँदैन। चूंकि चार पहिएहरु संग एक मोडेल हो, स्पैसी मां को कुनै पनि मामला मा तीन पाङ्ग्राहरु संग एक जगिंग मोडेल को खरीदना छ। सबै अनुलग्नकहरूमा, दृष्टिको बाल निर्देशनलाई मातृभाषामा निर्देशित गरिएको छ र बदल्न सकिदैन।
युग्मी ट्रेलर - जहाँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ
धेरै युवा परिवारहरूको लागि एउटा ठूलो समस्या प्रयोग पछि घुमक्कड हो। उहाँले stairwell खडा गर्नुपर्छ, त्यसपछि उहाँले धेरै ठूलो हुनु हुँदैन, र छिमेक बीच चोरी वा बर्बरता को डर छ। तपाईंले यसलाई5मा स्थिर राख्नुपर्छ। तल किनकि कुनै एलेवेटर उपलब्ध छैन। कोइ-ट्रलीले धेरै स्पेस-बचत राख्दछ र ढुवानी गर्न सजिलो छ। तर यो धेरै पटक त किनमेल बैग र Strollers अन्त मा घर मा स्थित हो मात्र बच्चा, सम्म सिढी चढ्नु भने। राम्रो घर हो, जहाँ गराजमा फ्रेम र निर्माण बसिरहन्छ। अथवा यो केवल रैक यहाँ छरिएको छ र बच्चाको ट्याब वा ट्र्यागासेस्की सहितको बच्चा लिने क्षेत्रमा लिईएको छ।
आधुनिक combi-van - सधैं उपकरण र मूल्यमा ध्यान दिनुहोस्
तपाईका सबै उत्पादनहरू तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, मूल्य एक निर्णायक संकेत हो जुन एक राम्रो प्रोसेसिंगको ग्यारेन्टी गरिन्छ। अहिले केही महिना जस्तै विश्वस्त कुराहरू, को घुमक्कड गर्न क्षति मा फ्रेम को एक स्थायी पतन कायम गर्नेछ। राम्रो निलम्बन वा गद्दाहरूको गुणस्तर, सबै बच्चाले यस बच्चाको कारमा विशेष रूपमा सहज हुन्छ। खतरालाई किनमेल, अचानक कार एक एक भारी बच्चा र सामान र क्षति पनि नयाँ खरिद आवश्यक बनाउन को बोझको सेवा असफल राम्ररी गरे घुमक्कड मा अवस्थित छैन भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण रूपमा बाहेक। विशेषगरी बालबालिकाको उमेरसम्मको लामो प्रयोगले यसलाई आवश्यक पार्दछ कि यो एक घुमक्कड सधैं एक धेरै बलियो मोडेल हो। यसैले यो सधैँ यस्तो बच्चाको कार किन्न चाहानुहुन्छ कि तपाई कुन किसिमको कार कार चाहिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। यसैले व्यक्तिगत कारहरु को खरीद संग एक तुलना मात्र मूल्य मा न केवल, तर रोजगारी को लाभ पनि विचार गर्नु पर्छ।
Kombikinderwagen - बच्चाहरु को परिवहन को लागि एक पेटेंट स्पेस सेभर
तपाईं एक संयुक्त घुमक्कड किन्न निर्णय छ, आफ्नो बच्चा आराम जन्म देखि किंडरगार्टन उमेर सबै यात्राहरूमा यहाँ बस्न वा सुत्न सक्नुहुन्छ। दायरा मा एक नजर संयोजन घुमक्कड कसरी विविध हुन सक्छ र त्यो हुन सक्छ कति constituents तपाईंलाई आश्चर्य हुनेछ। यो मतलब हो कि यस प्रकार को एक राम्रो स्ट्रोलर पनि 1000 यूरो को खर्च हुनेछ। तपाईं धेरै पोर्चुगलका लागि पहिलो पोर्चुगलको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै उपयोगी उपहार। यहाँ, तपाईं पहिले देखि नै एक महंगा र राम्रो बनाएको मोडेल लागि, सामान्य घुमक्कड बस अझै पनि धेरै अक्सर पुनर्निर्माण छ यो एक संयुक्त मोडेल रूपमा प्रयोग गरिन्छ तरिका हो किनभने हेर्न गर्नुपर्छ र भौतिक उच्च गुणवत्ता छैन भने चाँडै क्षति लगाउने र नेतृत्व गर्न सक्छन् र प्रशोधन खराब छ। आमाबाबु बन्नको लागी एक सार्थक खरीद, यदि आमाबाबुका सबै सामग्री साँच्चै उपयोगी छन् भने।
3 मा माउन्टेनर कैपिटल घुमक्कड 1 pram घुमक्कड मेगासेसेट 10 भाग मा बच्चा सीट, लेजरकोट, खेलकुद कार र सहायक उपकरण सहित
ठूलो डिलिवरी यो प्राम प्याकेजलाई चाहिएको केही पत्ते गर्दैन र तपाईंको र तपाईंको बच्चालाई शिशुको साथ दिनेछ। शामिल एक कार सीट (कार को लागि), एक बच्चा को स्नान र एक घुमक्कड को सीट (बगैचा)। व्यक्तिगत घुमक्कड संलग्नकहरू सेकेण्डमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सरल निर्माण प्रयोग गर्न सजिलो छ। कम वजन र स्लिम डिजाइनको कारण, तपाईं सजिलै कारमा घुमक्कड गर्न सक्नुहुनेछ।
सुरक्षित रहनुहोस् प्राभाव संग तपाईं सधैँ सुरक्षित पक्षमा हुनुहुन्छ। पर्वतारोहण स्ट्रोलरले युरोपेली सुरक्षा मानक EN1888 सँग मिल्दछ, जसले स्ट्रोलरहरूको लागि सुरक्षा आवश्यकताहरू निर्दिष्ट गर्दछ। सबै सामग्री Oeko-Tex मानक 100 अनुमोदित छन् र यसैले पूर्ण रूपमा हानिकारक मानिन्छ। यसबाहेक, निर्माताको रूपमा, हामी हानिकारक पदार्थहरूको अन्त्यमा चेकको साथ नियमित रूपमा प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोग गर्दछौं।
ठूलो किन्डरवेगन डिजाइन यो पर्वतारोही कप्तान घुमक्कड मात्र होइन अत्यन्त लचिलो छ, तर यो पनि पूर्ण आँखा हो। ठूलो न्युमेटिक टायर सँगको संयोजनमा आधुनिक रङ योजना र क्रोम लुकमा रिम्स सुन्दर दृश्यको लागि बनाउँछ। घुमक्कडको उत्कृष्ट डिजाइनमा प्रत्येक स्ट्रोलर संलग्नक साथै साथै विशाल विशाल डायपर बैग नेस्टल।
नवीन मूल्य / प्रदर्शन गर्भाधान र पहिलो ड्राफ्टको समयमा पनि, हाम्रो ध्यान सुरक्षा, आराम र डिजाइनमा छ - र यो एक किफायती मूल्यमा। पर्वतारोहणहरुबाट पुश चेयरहरु एक सहज मूल्य / प्रदर्शन अनुपात मा असाधारण उपकरण र गुणवत्ता प्रदान गर्दछ। कुनै कारण बिना नै, हाम्रो strollers बढि लोकप्रिय भइरहेको छ।
उत्कृष्ट ग्राहक सेवा घुमक्कड धेरै पटक परीक्षण गरिएको छ र अहिल्यै परीक्षण विजेताको रूपमा रन नगर्ने। वास्तवमा, केवल चयन गरिएको, टिकाऊ घटक उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले तिनीहरू घुमक्किएर धेरै रमाइलो हुनेछ। यो कहिलेकाहीँ एउटा समस्या आउन सक्छ, हाम्रो पर्वतारोहण ग्राहक सेवा सधैँ त्यहाँ तपाईंको लागि छ।
Kenderkraft stroller २ १ १ जुलाईमा, घुम्ने सेट, संयोजन घुम्ने, बग्गी, स्पोर्ट्स कार, क्यारीकोट, सामानहरू, सजिलो तह, se सिट गर्ने स्थान, किनमेल टोकरी, point पोइन्ट सीट बेल्ट, गुलाबी प्रदर्शन
Kinderkraft JULI आधुनिक र कार्यात्मक समाधानहरू संयोजन गर्दछ: गोन्डोला एक stroller मा परिणत हुन्छ
तीन स्थानहरूमा घुम्ने ठाउँको सिट समायोजित गर्न सम्भव छ: सिटि,, अर्ध-मिलान र झुठ्ठा स्थिति
आरामदायी र टिकाऊ ईवा फोमको साथ ह्यान्डलहरू र रेलिंगहरू मेशिन गर्दै
तह घुमाउने / stroller उल्टाउने विरुद्ध डबल सुरक्षा
यो यूरोपियन मानक EN 1888 अनुसार निर्मित थियो, जसले एक stroller को लागि सुरक्षा आवश्यकता र परीक्षण विधिहरू परिभाषित गर्दछ।
फ्रेडरिक ह्युगो ह्याम्बर्ग |3मा 1 कम्बी घुम्ने पूरा सेट | हार्ड रबर टायर | रंग: क्रीम र बेज सूचक
सेटमा फ्रेडरिक ह्यूगो HAMBURG31: Friedrich ह्यूगो को ठूलो HAMBURG सेट4सम्म सानैदेखि तपाईं र तपाईंको बच्चा सँगसँगै। वर्ष। विश्वसनीयता, स्थिरता, सुविधा र शहर, यो जंगल, रोडा सडक र cobblestones लागि सबै उपयुक्त। को परिष्कृत र विशाल सुविधाहरु तपाईं र तपाईंको बच्चा प्रसन्न हुनेछ। को छिटो-क्लिक सिस्टम सबै संलग्नहरू घरेलू र इकट्ठा गर्न पछिल्तिर सामना दुवै हो अनुमति दिन्छ।
फ्रिड्रिक ह्यूगो ह्यामबर्ग एक्सएनयूएमएक्स एट्याचमेन्टको साथ नि: शुल्क वितरित हुनेछ। प्याडेडहरू बेबी वाहक गद्दा संग जन्म बाट प्रयोग गरीन्छ। कारमा यातायातका लागि, कार सीट समावेश गरिएको छ। थप रूपमा, यो फ्रेममा क्लिक गर्न सकिन्छ। ECE R 44 / 04 लाई प्रमाणित, सीटले अधिकतम सुरक्षा, प्याडेड पट्टि र सीट कुशनको आश्वासन दिन्छ।6बाट महिनाले बग्गी सment्लग्नता हटाउन योग्य सुरक्षा पट्टी र स्लीप प्रकार्य प्रयोग गर्दछ।
प्रमाणपत्र एन 1888: THE फ्रेडरिक ह्यूगो HAMBURG किन छान्नुपर्छ 2004; नरमररुपले को छिटो-क्लिक गर्नुहोस् प्रविधिले सीट एकाइहरूको छिटो विधानसभा र disassembly ड्राइव, padded सजिलो, कार मा सानो पदचाप, ठूलो2इन्च टायर मा 12-मात्रा निलम्बन, को कुंडा पाङ्ग्रा, सबै सतहहरु लागि उपयुक्त निलम्बन। मा दुवै जर्मनी मा आमाबाबुको लागि पुस ह्यान्डल लचिलो आकार बदल्ने डिजाइन,2वर्ष वारेन्टी
VIDEO: YouTube मा जानुहोस् र प्रो कन्सोभ स्टोर च्यानल हेर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंले फ्रिड्रिक ह्यूगो हामबर्गको लागि धेरै भिडियोहरू र आवेदन उदाहरणहरू पाउनुहुनेछ
निःशुल्क ट्रायल? हामी फ्रिडेड्रिक हूगो हामबर्गको उत्कृष्ट गुण र निश्चित मूल्य / प्रदर्शन अनुपातको आश्वस्त छौं। फ्रिडेड्रिक हूगो हामब्रागलाई घरमै पूर्ण रूपमा निःशुल्क 30 दिन प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं उत्साहजनक हुनुहुन्न भने, हामी कार फिर्ता सीधा र 100% मा खरीद मूल्य फिर्ता गर्नेछौं।
Daliya Bambimo3in 1 stroller - combi stroller विशाल सेट १ pieces टुक्रा incl। बेबी नुहाउने र बग्गी र बच्चा कार सीट - एल्युमिनियम फ्रेम / ठोस रबर टायर - डायपर झोला / वर्षा कभर / बोर्डो-रातो प्रदर्शन मा बच्चाहरूको टेबल।
तपाईंलाई लाग्छ कि राम्रो प्रममा अझै धेरै पैसा खर्च हुन्छ? हाम्रो Bambimo 3in1 stroller द्वारा Daliya बिल्कुल ठीक विफल! यो मात्र राम्रो देखिदैन, यसले महँगो ब्रान्डेड उत्पादनहरूका सबै सुविधाहरू पनि समावेश गर्दछ। ...... बम्बीमो स्ट्रोलरसँग तपाईंसँग आराम, स्थिरता, सुरक्षा र एक आधुनिक डिजाइन संयुक्त छ! क्यारीकोट केवल केहि सेकेन्डमा स्पोर्ट्स सिटमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईं बुटमा धेरै ठाउँ मात्र बचत गर्नुहुन्न,
तपाईं लचिलो हुनुहुन्छ यदि तपाईंको बच्चा झूँडाउनुपर्दछ वा घुमन्तेमा सुत्नु पर्छ। सुविधाहरू शिशु सीट सिफारिश गरिएको उमेर: जन्मदेखि करीव करीव। 18 महिना लोड क्षमता: 13 किलोग्रामसम्म एट्याचमेन्ट: गाडीको सिट बेल्टमा यात्राको दिशा: यात्राको दिशा विपरीत ECE R44 / 04 युनिभर्सल ग्रुप0+ एडेप्टर बग्गी फ्रेममा प्रयोगको लागि3पोइन्ट सहित। सुरक्षा बेल्ट प्रणाली समायोज्य बोकेको ह्यान्डल हटाउन योग्य सूर्य सुरक्षा वजन 3,04 KG
आपूर्तिको क्षेत्र:3स्ट्रोलर एल्युमिनियम फ्रेममा 12in1 कैरीकोट / स्पोर्ट्स सीट क्यारकोट गद्दा क्यारीकोट क्यारी ह्याण्डल (डिटेकेबल, एक बटनको पुश) कैरीकोट कभर (डिटेकेबल, जिपर) कैरीकोट कभर (एक्सएनयूएमएक्सफोल्ड समायोज्य, डिटेकिएबल, जिपर स्टोरेक सिपर) बेयर4फ्रन्ट टायर2रियर टायर मच्छर जाल ह्यान्ड स्ट्र्याप शपिंग बास्केट कप होल्डर (सानो)
अर्बनो प्रम स्ट्रोलर बच्चा कार सीट 3in1 प्रणाली कार सीट (U2-Old Forest) प्रदर्शन
सेट समावेश: * प्रम / बग्गी * कार सीट, * स्लीपिंग ब्याग, * डायपर बैग र शपिंग बास्केट, * लेग गार्ड्स, * ब्याक कभर र मच्छरदानी, * खेल बोर्ड र सुरक्षा अवरोध
सुरक्षा: stroller यूरोपियन सुरक्षा मानक EN1888, कार सीट ECE R44 / 04 पूरा, यूरोपीयन संघ मा निर्मित,
3-in-1-SYSTEM सबै चीज तपाईलाई एक सेटमा चाहिन्छ। कार सीटबाट किनमेल बोर्डमा खेल बोर्ड। दर्जनौं बिभिन्न प्रस्तावहरू मार्फत खोजी नगरीकन समय र पैसा बचत गर्नुहोस्। हाम्रो सेट मा तपाइँको बच्चा लाई एक सुरक्षित र आरामदायी यात्रा को लागी चाहिने सबै चीज छ। * अगाडिको पाels्गो घुमाउँदै स्विइवलिंग फ्रन्ट व्हील्सले तपाईंलाई सजिलैसँग कार सार्न, कडा कुनाहरू बनाउन वा मलमा शप गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं ग्रामीण इलाकामा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने,
समायोजन तपाईं छिटो, सजीलो र सहजै ह्यान्डल वा फुटरेस्टको स्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं माथिको विन्डो खोल्न सक्नुहुन्छ वा क्यानपीलाई फोल्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। एक सुरक्षा अवरोध वा खेल उपकरण संलग्न गर्नुहोस्। खुट्टा कभर वा स्लीपिंग ब्याग माउन्ट गर्नुहोस्। र अधिक धेरै।
वजन: 14 किलो चौडाई: 60 सेमी उचाई: 114 सेमी ह्यान्डल उचाई: 83-120 सेमी Stroller (केन्द्र): 35x86x61 सेमी (डब्ल्यू एक्स एल एक्स एच) कार सीट 3,2 किलो बाहिरी आयाम: 43XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (W x L) प्याक: 68x47x25 सेमी
Osann 121-240-231 K1 combi पुशचेयर - in मा १ सम्भव छ - तह कालो प्रदर्शन
ALLROUNDER: हाम्रो ठूलो संयोजन श्रोता ठूलो शपिंग टोकरी संग संभाल गर्न सजिलो छ र, यसको कम्प्याक्ट आकार को लागी धन्यवाद, कारमा यातायात गर्न सजिलो र यात्राको बखत।
IN IN3प्रणालीमा: stroller एक उचित संलग्नक को साथ एक मानक stroller को रूप मा वा एक बच्चा कार सीट को साथ एक यात्रा प्रणाली को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ (एडेप्टर आवश्यक) र पछि चुस्त खेल stroller को रूप मा
अनुकूल उपकरण: स्ट्रोलर सेटमा नरम प्याडेड र हटाउन योग्य क्यारकोट, एक आरामदायी खेल सीट, एक प्याडेड--पोइन्ट बेल्ट प्रणाली र अन्य धेरै सुविधाहरू समावेश छन्।
FOLDABLE: ट्राली सजिलैसँग एक कम्प्याक्ट प्याकेजमा फोर्ड गर्न सकिन्छ। आयामहरू जब फोल्ड गरिन्छ: x 58 x २ x x cm२ सेमी - यो नवजात शिशु र १ children किलोग्राम सम्मका बच्चाहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ।
सबै टेरेनका लागि: बहु-समारोह स्ट्रोलरको स्प्रि load्ग-लोड फ्रन्ट व्हील्स स्विइवल र लक गर्न सकिन्छ र त्यसैले समतल र असमान क्षेत्रको लागि उपयुक्त छ। हवाका पाels्ग्रा विकल्पको रूपमा अर्डर गर्न सकिन्छ
VCM combi - stroller, 2in1 वा 3in1 "VCK Kidax" 3in1 - बच्चा सीट सहित: एन्थ्रेसाइट डिस्प्ले
वसन्तले भरिएको एल्युमिनियम फ्रेम
स्लाइडर ह्यान्डल सिंथेटिक छाला (ह्यान्ड सिलाई)
बच्चा क्यारिज १२-मार्ग समायोज्य स्लाइड
2in1 वा 3in1 बच्चो सीट को साथ stroller
सजावट: सजावट समावेश छैन
१ मा संयुक्त stroller carry, stroller सेट सहित carcot र बच्चा सीट (कार), बच्चा फूल IVY, melange प्रदर्शन
HUGE SCOPE: IVY combi stroller शिशु देखि बालवाडी मा सही दीर्घकालीन साथी छ। वितरणको क्षेत्र शामेल छ: एल्युमिनियम फ्रेम, रूपान्तरण टब (खेल सीट मा रूपान्तरण), बच्चा सीट (कार), डायपर झोला, बच्चा स्नान कभर, वर्षा संरक्षण र लामखाना।
COMFORT: IVY बच्चा कार सीट IVY फ्रेम को साथ साधारण क्लिक-अन प्रणाली संग जोड्न सकिन्छ र कारमा 3-पोइन्ट बेल्टको साथ जोडिएको छ। नवजात शिशुहरूको लागि १ मा क्यारीकोट रूपान्तरण छिटो र सजीलो एक व्यावहारिक खेल सीट मा रूपान्तरण गरियो। टब वा खेलकुद सिट यात्राको दिशासँग र यसको बिरूद्ध जोड्न सकिन्छ। यदि बच्चाको सिट वा क्यारीकोट हटाइयो भने, फ्रेम केवल एक हातले कम्प्याक्टली तहमा जोड्न सकिन्छ।
सुरक्षा: बच्चाको सीट ECE R44 / 04 मानकको पालना गर्दछ र यसरी कारमा तपाईंको बच्चाको लागि इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। घुमन्ते यूरोपियन सुरक्षा मानक EN 1888: २०१२ लाई पालना गर्दछ।
गुणवत्ता: केवल उच्च गुणस्तरको सामग्रीहरू घुम्ने IVY मा प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रकाश एल्युमिनियम फ्रेमको साथ यो उत्तम दैनिक साथी हो।
डिजाइन: IVY stroller को कालातीत र स्पोर्टी डिजाइनले एक्सेन्टहरू सेट गर्छ र ग्यारेन्टी गरिएको नेत्र-क्याचर हो। हाम्रो सबै उत्पादनहरू डिजाइन, विकसित र अत्यन्त सावधानीका साथ निर्माण गरिएको हो, अधिकतम गुणस्तर र ध्यानमा ध्यान - र उचित मूल्यमा।
Hauck Pacific4Shop N Drive Kombikinderwagen7teilig bis 25 kg + Babyschale + Babywanne umbaubar zur wendbaren Sitzeinheit mit Beindecke, leicht, extra große Räder, melange charcoal (grau)Anzeige
व्यावहारिक - प्रशस्त वाहककट एक उल्टो सीट एकाईमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जबकि सम्मिलितको साथ कभरको लागि Fußsack संयुक्त गर्न सकिन्छ
सुरक्षित - शिशु सीट जीरो प्लससँग--पोइन्ट बेल्ट छ र ECE /3 44/०04 परीक्षण गरिएको छ; Stroller सँग--पोइन्ट बेल्ट छ र युरोपियन सुरक्षा मानक EN १5 अनुसार परीक्षण गरिएको छ
एक्सएनयूएमएक्स बेबी स्ट्रोलर फोल्डि Anti एन्टि-शक स्ट्रोलर लाइटर सर्टिफिकेशन ECE बहु कार्यहरू संयुक्त स्ट्रोलर सूचकमा फ्लोरब्लू एक्सएनयूएमएक्स।
यस घुमक्कड को आयाम: 60x98x35 सेमी, खुला आयाम: 78x60x107 सेमी
समायोज्य ब्याकरेस्टको साथ तीन मोडेल: 100 ° / 145 ° / 180 °
अगाडो पा of्ग्राको व्यास: 17 सेमी, पछिल्लो पाels्ग्राको व्यास: 29 सेमी
यो पुशचेयर स्ट्रोलर चार समायोज्य बोक्ने ह्याण्डलहरूसहित सुसज्जित छ जुन भुइँ 95 सेमी / 102 सेमी / 107 सेमी / 111 सेमी अग्लो माथि छन्।
सजीलो गर्न को लागी Stroller सजिलो गर्न को लागी तह तह प्रणाली: एक कदम ब्रेक र म्यानुअल फोल्डिंग संग तह र द्रुत खोलि
अघिल्लो लेखबिरालो खाना